Fotoan’ny asa sy vokatra izao
Nanamafy ny fiaraha-miasa amin’ny fanjakana ny Fivondronamben’ny eveka. Voaresaka koa ny zava-misy eny anivon’ny distrika sy fiainam-pirenena. Hafatry ny papa Fransoa ny momba ny fanabeazana hisian’ny fandriampahalemana maharitra sy ny fanomezana asa.
Nohamafisin’ny filoha tamin’ireo governora fa fanatanterahana vina sy velirano ny 2022, mitaky fanatsarana sy fanafainganana ny fomba fiasa. Fotoana hamahana olana sy hanitsiana izay lesoka izao, fa ny vokatra ihany no andra-san’ny vahoaka amin’izy ireo.
Nohafaran’ny filoha ny manamboninahitry ny Tafika malagasy ny maha zava-dehibe ny firaisankina sy ny fane­tren-tena. Izy ireo no tokony ho maodely sy fitaratra amin’ny fitondran-tena, fahitsiana, fandavan-tena ary fanompoana Tanindrazana.
Taorian’ny fitsidihana ny fanova herinaratra nipoaka tao Andekaleka, fantatra fa hasomparana niniana izany. Tsy ekena ny fanimbana fananana iombonana noho ny tsy fitovian-kevitra politika. Karohina izay nahavanon-doza ary homena valisoa izay manome vaovao.
Nilaza ny minisitry ny Raharaham-bahiny fa ato ho ato ny fihaonana faharoan’ny vaomiera frantsay-malagasy momba ny famerenana an’ireo Nosy malagasy. Tokony ho tamin’ny janoary 2020 izany, saingy tsy tanteraka noho ny fihanaky ny Covid-19.
Tafody an-tanindrazana ireo Malagasy voasaringotra amin’ny “Raharaha volamena 49 kg” tatsy Kaomoro. An-dalana koa ny fampodiana an’ireo tratra tany Afrika Atsimo tamin’ny volamena 73,5 kg. Tsy mbola voaresaka ny amin’ ny fampodiana an’ireo volamena.
Fotoan’ny asa izao? Hitan’ny hafa na ny havany izay tsy ahitana vokatra…